Barreessaan paartii Kongirasii Federaalawaa Oromoo (KFO) Obbo Baqqala Nagaa waggoota muraasa dura mana keessa ugguramani as malitti jiru? Siyaasa biyya keessaa akkamin ilaalu kan jedhu gaafanneerra.
Waajjira Koominikeeshinii magaala Naqamterraa akka odeeffannetti sababa qondaalonni magaalitti to'atamaniif wanti beekamu hin jiru.
Torbaniitti filmiiwwan Afaan Amaaraan hojjataman lama ykn sadii yoo heebbifaman kanneen 80 ol ta'an yoo hojjataman, maaliif afaanoota biyyatti biraatiin hojjachuuf fedhiitu dhiibee laata?
Haleellaa boombii magalaa Naqamteetti Roobii raawwateen booda taphataan kubba miilaa kilabii bulchiinsa magaalaa Naqamtee tokko ajjeefame.
Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Anfilloo Magaalaa Muggiitti namoonni jaha ajjeefamu qondaalli motummaa himan. Ajjeechaan akkamiin raawwate?
Walitti bu'iinsa buqqaatota magaala Baatuu qubatan fi aangawoota magaalattii gidduutti uumameen qaamaa qaqqabe.
Ministirri Muummee Abiy Ahimad guyyaa har’aa siidaa B/J Taaddasaa Birruu yeroo eebbisisanitti hawaasa waliin marii taasisaniiru. Marii kana irratti dhimmoota kanaan dura dubbatani hin beekne dubbataniiru.
Dhaabni ABO karaa nagaan qabsaa'uuf erga biyyatti gale as waajjiraalee banachuufi miseensota gurmeessaa akka jiru BBC'tti hime.